Otu esi eto topinambur, na-akụ ube ube n'ala
Jerusalem atịchok bụ osisi perennial, nke yiri nke ọma na nduku. Ọ na-adịgide ndụ na ọnọdụ ọnọdụ ihu igwe anyị, ọ bụghị ihe gbasara nlekọta, na-enye nnukwu owuwe ihe ubi. Atichoke Jerusalem bụ nke a maara na nri na ọgwụ maka abamuru ya, ihe na-agwọ ọrịa. N'isiokwu a, ị ga-amụta uru nke osisi, otú Jerusalem artichokes si mụta nwa, yana iwu ndị bụ isi maka ịkụ na ịchekwa Jerusalem artichokes.
Yacon: iji akwụkwọ nri, ihe ubi na nlekọta
Tinyere poteto, tomato, ọka, sunflower na omenala ndị ọzọ si America, e wetara anyị anụ ahụ. Ihe omuma a a na-ejighi mara ya yiri àgwà atichocho nke Jerusalem, nke toro ogologo oge ma mara ọtụtụ ndị na-elekọta ubi. K'anyị mara nke ọma na osisi a, ọ dị obere maka anyị.